Wax Kabaro Taariikhda Caalimkii Soomaaliyeed Shariif Cabdi Nuur ﴾A.H.U.N﴿ - FOOLAAD MEDIA
Home » Diinteena Suuban » Wax Kabaro Taariikhda Caalimkii Soomaaliyeed Shariif Cabdi Nuur ﴾A.H.U.N﴿
Wax Kabaro Taariikhda Caalimkii Soomaaliyeed Shariif Cabdi Nuur ﴾A.H.U.N﴿
Sh shariif cabdi nuur shariif xasan shariif aadan shariif maqbuul waxa uu ku dhashay magaalada Baabili ee ka tirsan dalka ethiopia sanadka markii uu ahaa 1941M. Waxaanu kasoo jeedaa Qabiilka Asharaafta.
Sheehka waxaa ladhashay 10 Wiil oo dhamaan ka wada weynaa. sheekh shariif cabdi nuur waxa uu barashada cilmiga diiniga ka bilaabay magaalada Baabili . Naxwaha waxa uu kabartay Sh Axmed Baaruud oo ahaa caalim Oramo ah.
Sidoo kale waxa uu naxawaha kabartay sh xasan macalin mareexaan sidoo kale walaalkiis Cabdulaahi shariif xasan waxa uu kabartay Naxwaha sidoo kale. Sh cali Jawhar isna Shariifka waxa uu kabartay Naxwadda.
Kadib markii halkaa uu kabartay naxwadda waxa uu aaday magaalooyib kale sida Harer Mudo ayuu ku sugnaa halkaas kadina waxa uu tagay jig-jigo Sanadka markii uu ahaa 1959M.
Sheekh shariif cabdi nuur waxa uu doonayey in uu tago jaamacada Azhar. Shariifka waxa uu markaas raacay dalinyaro ay isku da’ahaayeen waxa ay raaceen Tareen illaa ay ka gaareen Suudaan.
kadibna waxa ay halkaas ka raaceen doon illaa ay gaareen Masar. Sh shariif cabdi nuur waxuu markaas galay jaamada Azhar Kuliyada Shareecada iyo Qaanuunka. Waxa uu halkaa ku dhamaystay Aqoontiisa jaamacadeed.
Waxa uu Caalimka usoo noqday wadan kiisa soomaaliya waxa uu tagay machadkii Xalane. Shiikha waxa uu macalin ka noqday rugtii Boola tigniko ee muqdisho. sidoo kale waxaa looga sameeyey masaajidada xalqado waa wayn waxa uuna bilaabay dhigida kutubada iyo duruusta. Waxa uu shiikh shariif cabdi nuur bilaabay dhamaan faniyada diinta islaamka sida Fiqiga , Xadiiska , Tafsiirka , Naxwaha, Sarfiga iyo qaar kale. Sigaar ah waxa uu Shiikha ugu dadaali jiray dhigida Xadiithka Nabiga SCW
Shariifka waxa uu sharxay kutubta Xadiithka ugu waa wayn ee loo yaqaan Umuhaatu Sita.
1990M shiikha waxa uu sharxay dhamaan ku tubta Umahaatu sitah.
Shiikh shariif cabdi nuur waxaa laxiray sanadka markii uu ahaa 1978M.
Xariga waa wado ay maraan culimada ra’yigooda diiniga ah ay cabiraan ku adkaysta sida Axmed binu xambal , sheekhul islaam Ibnu Taymiyah iyo ibnu Qayim.
Soomaaliya waxa ka dilaacay dagaalo sokeeye shiikha waxa uu aaday markaas Sacuudiga halkaas oo lagu soo dhaweeyay sanadka markii uu ahaay 1984M waxaana ustaad looga dhigay jaamacadda Malik Sacuudi.
Shiikha waxaa layiraahdaa waxa uu kamid yahay afarta caalim ee soomaray muslimiinta Qarnigaan .
waxaa intaa dheeraa in uu ahaa qof illaahay akhlaaq ku manaystay oo aan waligii dhib laga soo sheegin .
Marar badan culumo uu ka aqoon badanyahay wax ka sheegayn laakiin waa uu iska diiday in uu ujabaabo .
waxaa lagu xasuustaa in uu ahaa nin aduunyada ka zaahididay.
waxa uu ahaa nin aad ugu adag sunada Nabiga SCW oo lahaa mawaaqiif adag oo meelmar ah.
Dhinaca kale dadka shariifka duro waxay ku sheegaan in uu wax ka sheegay dowlada sacuudiga oo yiri gaalada ayey ushaqaysaa waxaa kale oo shariifka lagu qabsadaa in uu fidnadii khaliijka wax ka sheegay culimada sacuudiga ee dawlada la safatay xiligaas. Waxaa shariifka ku raacay fidnada khaliijka sh albaani , sh muqbil iyo culimo kale.
Shariifka waxa uu markaas sheegay in culimada sacuudiga culays ka saaranyahay xagga dowlada sacuudiga Fataawadooda siyaasiga ahna lagu kalsoonaankarin.
Qadiyada sacuudiga shiikha 100% asaga ayaa kaga saxsan raga dowlada dabadilifka u ah ee ka cabsado.
Sidaa si lamid ah waxaa shariifka lagu haystaa in oo ogolyahay in xarakooyinka ama jameecaadka muslimiinta khayrdoon yihiin isla markaana ay waajib tahay in la ixtiraamo Tacasubka iyo Qaraabo kiilkana la iska illaaliyo waxaan arintaa shiikha ku raacsan Sh ibnu baaz , Sh cuthaymiin iyo culimo kale.
Shariifka waxaa kale oo dadka qaar ku qabsadeen in uu qabay waqtigii Maxaakiimta in lala jihaado itoobiyaanka oo wadanka laga saaro askarta soomaalida ee itoobiyaanka laso coto loodigo lana laayo hadee yeeli waa yaan gaaladana sooraacaan .
Shiikha waxaa uu wax badan ku xanuun sanayey Magaalada Barakaysan ee Makatul-Mukaramah Halkaas ayuuna shiikha ku geeryooday. Sh marka uu dhimanayey da’diisa waxa ay aheed 76 sano Alle Ha unaxariistee sh shariif cabdi nuur. Anagana alle ha inaga dhigo ku wii ku dadaalo cilmiga oo umada ugu tagay siina faafiyo.
gadaashiisna allaah nama fidneeyo. waxa uu dhintay Sh Shariif cabdi nuur Khamiis taariikhda ay ku beegneed 12/shawaal/1438H kuna beegneed 6/July/2017M.
Xigasho Page-ka Face-buugga: https://www.facebook.com/ibnusaciid.salafi?fref=nf